UCarlos Ruiz Zafón: ukuzingisa komphefumlo ngoonobumba | Uncwadi lwangoku
UCarlos Ruiz Zafón: iincwadi
UCarlos Ruiz Zafon.
UCarlos Ruiz Zafón wayengomnye wababhali ababalaseleyo bexesha lama-XNUMX. Akulolize ukuba uthathwa njengomnye weenoveli ezifundwa kakhulu kwihlabathi, kuphela emva kweCervantes; lo mbulelo kowona msebenzi wakhe ubalaseleyo: Isithunzi somoya (2001). Le noveli yenza ukuba umbhali asebenze kakuhle kwaye uchazwe ngabagxeki njengala:
Umbhali wenoveli wayenendlela yakhe, apho wadibanisa iintlobo ezahlukeneyo zoncwadi. Wafaka kwindalo yakhe into ebalulekileyo eyenziwe iyelenqe ngalinye en into eyahlukileyo engenakuthelekiswa nanto. Ngalo lonke ixesha lomsebenzi wakhe imisebenzi yakhe yaguqulelwa kwiilwimi ezininzi, ngayo ikwazile ukoyisa abafundi abangaphezu kwezigidi ezingama-25, owayehlala ejonge phambili kumabali akhe angaqhelekanga.
1 Idatha engobomi
1.1 Izifundo zokuqala kunye namanyathelo okubhala
1.2 Izifundo zaseyunivesithi kunye namava obuchule
2 Uhlanga loncwadi
2.1 Ukufa kwangoko
2.2 Iinoveli zikaCarlos Ruiz Zafón
3 Ezinye zeencwadi zikaCarlos Ruiz Zafón
3.1 Inkosana yenkungu (1993)
3.2 UMarina (1999)
3.3 Umthunzi womoya (2001)
NgoLwesihlanu kaSeptemba 25, 1964, isixeko saseBarcelona sabona ukuzalwa kukaCarlos Ruiz Zafón. Iqela lakhe losapho lenziwa nguyise, uJusto Ruiz Vigo, iarhente yeinshurensi; Umama wakhe, uFina Zafón, kunye nomntakwabo omdala, uJavier. Ukusukela ebuntwaneni, wabonakalisa ubizo njengombhali kunye nomfanekiso ngqondweni omkhulu. Ubungqina boku ngamabali amaphepha amathathu awabhalayo ebuntwaneni bakhe, kunye nemixholo yokoyikisa kunye neMartians.
Izifundo zokuqala kunye namanyathelo okubhala
Wagqiba izifundo zakhe zokuqala kwikholeji yamaJesuit: iSan Ignacio de Sarrià, isakhiwo esakhuthaza ubudlelwane bakhe nesimbo seGothic. Kwiminyaka eyi-15, wagqiba iphepha elinamaphepha angama-600 ngokusekwe kwimfihlakalo yama-Victoria: IHarlequin Labyrinth. Umbhalo uthunyelwe kubapapashi abohlukeneyo, kodwa awuzange upapashwe. Ukusuka kuloo mava washiyeka eneengcebiso ezixabisekileyo zomhleli we-Edhasa: UFrancisco Porrúa.
Izifundo zaseyunivesithi kunye namava obuchule
Wangena kwiYunivesithi yaseBarcelona ezizimeleyo ukuba afunde iSayensi yoLwazi. Ngelixa wayefunda unyaka wakhe wokuqala wezifundo, wafaka isicelo sokusebenza kwiiarhente ezahlukeneyo zentengiso. Wakwazi ukuqeshwa ngu UDayax, apho aphakama khona evela kwigalelo waba ngumbhali. Kamva, usebenze nezinye iiarhente ezibalulekileyo, ezinje: Ogilvy, I-Tandem / DDB y Mc Cann Iqela leHlabathi.
1992, URuiz Zafón uthathe isigqibo sokuthatha umhlala-phantsi kwintengiso kwaye azinikele ngokupheleleyo kuncwadi. A) Ewe waqala ukubhala inoveli eyimfihlakalo kunye nefantasy, eyafikelela kunyaka olandelayo: INkosana yeMist. Kwingcebiso yentombi yakhe, wamzisa kukhuphiswano zoncwadi ulutsha ukusuka kumshicileli U-Edebé, ophumeleleyo. Kunye nebhaso, wafumana isixa semali esikhulu ngelo xesha.
Umbhali uthathe isigqibo sokutyala imali yebhaso ngokulandela ezinye izinto azithandayo, i-cinema, njalo bafudukela kwisixeko saseLos Angeles. Nje ukuba uhlale apho, uqalise ukubhala izikripthi, ngaphandle kokuyeka ukuyilwa kweenoveli zakhe. Kungekudala emva koko, wapapasha ukulandelelana kwemisebenzi yakhe yokuqala: Ibhotwe lasezinzulwini zobusuku (1994) kunye Izibane zika septemba (amashumi alithoba anesithoba anesihlanu); ukuze ugqibezele Inkungu Trilogy.
Ngo-1999, wazisa UMarina, inoveli echazwe ngumbhali njengo: “… oyena mntu buqu kuyo yonke imisebenzi yakhe”. Kunyaka emva koko, wagqiba kwelokuba abheje kuluntu lwabantu abadala kwaye waqala nge-tetralogy Amangcwaba eencwadi ezilibalekileyo, kunye nokupapashwa kwe- Isithunzi somoya (2001). Ngokukhawuleza, umsebenzi uthengise ngaphezulu kwesigidi se-15 Iikopi, ezidibanisa umsebenzi weSpanish.
UCarlos Ruiz Zafon Usweleke ngoJuni 19, 2020 eLos Angeles (e-USA), eneminyaka engama-55 ubudala nasemva kokulwa iminyaka emibini nomhlaza wekolon.
Iinoveli zikaCarlos Ruiz Zafón
INkosana yeMist (1993)
Ibhotwe lasezinzulwini zobusuku (1994)
Izibane zika septemba (1995)
ITetralogy Amangcwaba eencwadi ezilityelweyo
Isithunzi somoya (2001)
Umdlalo wengelosi (2008)
Ibanjwa laseZulwini (2011)
Ilebyrinth yemimoya (2016)
Ezinye zeencwadi zikaCarlos Ruiz Zafón
Ngehlobo lowe-1943, umenzi weewotshi Umkroli kaMaximilian le yazisa umfazi wayo Andrea noonyana bakhe -U-Alia, u-Irina noMax- ukuba baya kuhamba kwindawo ethile kunxweme lweAtlantiki, ukuze bazikhusele emfazweni. UMax akonwabanga sesi sigqibo, kuba akafuni kushiya ikhaya lakhe. Ngobusuku obandulela ukuhamba, utata wakhe wakwazi ukumonwabisa emva kokumnika iwotshi yesilivere ngomhla wokuzalwa kwakhe.
Ngexesha lohambo, uMaximilian uqala ukuxelela abantwana bakhe ngembali yendlu, equlathe ubumnyama bangaphambili. Kudala-dala, unyana wabanini babetshonile kwaye wasweleka kwiimeko ezingaqhelekanga. Emva kohambo olude, abaCarvers bafika kwikhaya labo elitsha, indawo engaqondakaliyo nothuli ngenxa yokusetyenziswa kwexesha elide; kwangoko, baqala ukukhupha.
Ngokudibeneyo, amalungu osapho ayanceda ekucoceni, ebashiya bediniwe. Emva kwekhefu elincinci, uMax, oqiqayo kwaye akoyiki, iqala ukujonga izinto ezingaqhelekanga nezonakalisayo. Ukusuka apho, lo mfana phila amaxesha amnyama xa kudibana nomntu okhohlakeleyo: Inkosana yenkungu, enika umnqweno, kodwa ngexabiso eliphezulu kakhulu.
INkosana yeMist ...
U-Oscar Drai ubuyela e-Barcelona emva kweminyaka emininzi yokuphila ehlutshwa lixesha elidlulileyo, kulapho agqiba khona ukuqala ukubalisa ibali lakhe. Yonke le nto yenzeke xa wayeneminyaka eyi-15 kwaye wabaleka kwisikolo esibhodisayo ukuya edolophini. Ukuthanda ukwazi kwamkhokelela kwindlu endala eSarriá, apho wafumana iwotshi endala epokothweni, awayehamba nayo xa kwakufuneka ahambe engxamile.
Oscar, uvalo oluthile, luthatha isigqibo sokubuya lubuyise into, kodwa uyamangaliswa nguMarina, omthatha notata wakhe uGermán. Uyalwamkela uxolo lomfana ngokuthatha iwotshi. Emva kwencoko, amakhwenkwe adibana ukuhamba ngezitrato zaseBarcelona, ​​kwaye ke ngokwazana ngcono. Umhala olandelayo, UMarina uthatha uOscar emangcwabeni, apho ambonisa khona ingcwaba elithile.
Ingcwaba linelitye lengcwaba elinombhathane omnyama oqingqiweyo, awunagama. I-niche yile Ndwendwelwe kanye ngenyanga ngenenekazi elinobunzima, oshiya kuphela i-rose ebomvu. Benomdla, ulutsha luphonononga le meko imbi, ebakhokelela kwishishini lokufakelwa elidala. Apho bafumanisa iimfihlelo ezothusayo ezingqonge umnini mveliso: uMikhail Kolvenik.
Uhambo oloyikisayo lubakhokelela ekubeni basongelwe kwibali elibi, ziyingozi kakhulu kwaye ziya kuphawula ikamva labo ngonaphakade.
UMarina (iThala leencwadi uCarlos ...
KwiBarcelona ethuleyo emva kokuphela kweengxwabangxwaba, abancinci UDaniel Sempere uhamba ngesandla noyise ukuya phambili indawo engaqondakaliyo. Le iyayithatha Emangcwabeni eencwadi ezilityelweyo; Apho acela khona khetha incwadi, yintoni Kuya kufuneka unakekele ngokungathi bubutyebi. Enomdla, uDaniel ukhetha isicatshulwa esibiziweyo Isithunzi somoya, Ibhalwe nguJulián Carax.
Xa ndifika ekhaya, ngokukhawuleza funda le ncwadi uze upelekelwe libali, ke ugqiba kwelokuba akhangele ulwazi oluninzi malunga nombhali, kodwa akukho mntu unokumazi. Kungekudala, ubalekela kuLaín Coubert, indoda engaqondakaliyo onqwenela ukutshabalalisa yonke imisebenzi yeCarax. Lo mntu ungaqhelekanga wenza konke okusemandleni ukufumana ikopi kaDaniel.
Emva kokuqhubeka nokuphanda, uDaniel ubandakanyeka kuthotho lweemfihlakalo ezijikeleze umbhali. Ukusuka apho — phakathi kwexesha elidlulileyo nelangoku— abalinganiswa abaliqela ababandakanyekayo kwimfihlakalo baqala ukuvela. Njengokuba yayingamaqhekeza e iphazili, lonke ibali liyalingana ngokugqibeleleyo phezulu finalmente gqibezela bonke Amayelenqe ejikeleze iyelenqe.
Isithunzi somoya ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » I-Biography » UCarlos Ruiz Zafón: iincwadi
Iincwadi zikaJJ Benítez